Daawo: JANAN oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay 'tallaabo ay qaadeen xubno ku xiran' madaxweyne Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Daawo: JANAN oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay ‘tallaabo ay...
Daawo: JANAN oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay ‘tallaabo ay qaadeen xubno ku xiran’ madaxweyne Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee Amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyay taliyeyaasha ciidamada, gaar ahaan kuwii sida weyn ugu dhawaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay weli ku dhaqmayaan caqliyadii madaxweynihii hore.
Cabdirashiid Janan ayaa si adag uga horyimid tallaabadii dib loogu soo celiyay diyaarad rakaab oo uu saarna Maxamed Cabdullaahi Gardhuub oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo oo rabtay inay ka degto gobolkaas.
“Waxa arrintaas sameeyay oo meesha la dhigay baabuurta NISA, ciidamada waxan inay sharci darro yihiin waa arkaan markay diideen waxa dhacday in guddoomiyaha degmada ee nidaamkii hore ee jiray uu garoonka dhex dhigo baabuur isaga iyo ilaaladiisa, illaa meesha ka dhacdo buuq iyo ciidan kala qeybsado oo xabad la rido,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay in amarkaas uu bixiyay Taliye Biixi oo uu adeegsaday Sarkaal kale oo joogay gobolka iyo maamulkii ay meesha geysatay dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Farmaajo kursigii waa ka degay, oo weli gobolkii waa dhibaateysan yahay uma dulqaadan karno. Kulane Jiis ayaa xukuma oo Taliye Biixi ayaa askar amraya wax la dhageysan karo ma aha.”
Waxa uu sheegay in taliyeyaasha amarkaas fuliyay ay wiiqayaan siyaasada cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo dhigaysa in uusan jirin aargoosi siyaasadeed iyo in wixii hore u dhacay hore looga sii socdo.
“Maamul shacab doorteen ma aha, nidaam dowli ah oo dalka ka jira soo magacaabay ma aha, ma dhihi waa maamul. Waxa u baahan in lala xisaabtamo nimanka talisyada ciidanka ka kala tirsan.”
Ugu dambeyntiina waxa uu ka dalbaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu wax ka qabto beegsiga ay wadaan taliyeyaasha weli ku dhaqmaya nidaamkii Farmaajo, islamarkaana culeyska laga qaado gobolka Gedo.